Marta sy Maria – Tsodrano
Marta sy Maria
Genesisy 18 : 1-15
Kolosiana 1 : 24- 2 : 10
Lioka 10 :38-42
Tovovavy roa samy nipetraka tao Betania. Tovovavy roa samy namana akaiky an’i Jesosy. Tovovavy mirahavavy samy manana ny toetrany. Samy nihevitra ny hahazo ny fakasitrahan’i Jesosy. Ny iray amin’ny fikarakarana ny handraisana Azy ny faharoa kosa dia ny mipetraka mihaino Azy ka mankafy izay lazainy. Tsy iza izany fa i Marta sy Maria.
Tonga ao an-trano Jesosy mandeha ho azy ny fihetsika nataon’i Marta. Izay tsy fantatra dia ny hoe : »Voazara ve ny asa tao an-tokatrano sa anjaran’i Marta ny mikarakara tamin’io fotana io. Izay voalaza dia ny tsy nahatomombana ny asa nataon’i Marta, satria niasa irery izy. Ary iza amin’ny vehivavy no tsy ohatran’i Marta mihetsika atsy mihetsika aroa, indrindra moa fa izany hoe handray olona izany, ka olo-mana-kaja. Ary i Maria dia nahazo tombony tamin’ny asa nataon’i Marta, satria afaka nihaino tsara an’i Jesosy. Toetra hanahafatsika an’i Marta io. Endrey izany fivorian’ny Synodam-paritany ka misy fisakafoanana. Olona maro no mirotsaka ao an-dakozia ary tsy vitsy no mihevitra fa tena asan’Andriamanitra mihitsy no hataony. Izay mahagaga antsika anefa dia ny mandreha an’i Jesosy manakina ny asa rehetra nataon’i Marta. « Marta, Marta, maro ahiana sy be herehina hianao ». Dia raha tsy nanao izany ve i Marta dia ahoana angamba tsy ho maizim-bava vilany vao mihinan-kanina. Ary raha tsy nisy nikarakara ve ny sakafo moa tsy mody tsy nihinan-kanina ny mpamonjy fivorian’ny Synodam-patitany.
Fa andeha ho jeretsika koa i Maria. Mipetraka eo an-tongotry Jesosy ary mihaino ny teny rehetra aloakan’ny vavany. Ny fandraisana ny tenin’ny Tompo no maika taminy. Ny tenin’i Jesosy izay nandaozan’ny olona ny tranony ka hanenjehany hatrany an’efitra aza mba handreha izany. Izao Jesosy tonga ao an-tokatrano zava-dehibe izany. Tsy mampaninona ny zavatra rehetra ny maika aloha dia ny mihaino an’i Jesosy. Ary tahaka an’i Maria koa isika. Endrey ny firohotry ny olona mamonjy fanompom-pivavahana. Tsy vitsy ny Fiangonana miditra indroa fa mangetaheta ny tenin’Andriamanitra ny olona. Ary Jesosy rahateo no niteny fa izay tahaka izany dia nifidy ny anjara tsara izay tsy halaina aminy.
Ahoana moa no hahadiso raha milaza isika fa miangatra Jesosy. Heverintsika fa Aminy tsy misy dikany daholo izany ny nataoko. Ilay izaho nandany vola aman-karena nikarakara izay tena mba hahatsara ny fotoam-pivavahana. Nitady orga, nanofa sono, izay tsy nalaiko tamin’ny fiangonana akory ny vola hofany fa ny taty am-paosiko no nanaraka sy ny sisa. Nefa Jesosy nilaza hoe : « Zavatra iray loha ihany no ilaina… » Ny lehibe dia ny hahazoana mandray ny tenin’Andriamanitra ary ny voalohany tokony handray izany dia ny tenatsika tsirairay avy. Fa tamin’ny ilay isika nikarakara ara-lojistika ny fanompom-pivavahana iny, mba nisy ve fotoana mba nahazoana ny tenin’Andriamanitra. Indraindray aza dia fahasosorana sy fahatezerana no azo ka mahatonga antsika hiteny tahaka an’i Marta hoe : « Raha tsy misy ahy tsy mba vita tahaka an’iny iny fotoana iny. Ry Ranona izany dia mijery fotsiny sy mipetra eny ambony dabilio fotsiny no nataony. I Marta aza moa dia nanakina mihitsy an’i Jesosy ; « Tsy mampaninona anao va ny hamelan’ny rahavaviko ahy manompo irery. »
Tsy azo ialana fa sady manana ny toetran’i Marta isika no manana koa ny toetran’i Maria. Ny tsy mety dia ny hanenjanatsika betsaka ny toetra ny iray amin’izy mirahavavy. Mbola misy mantsy ao amin’ny Fiangonana olona izay mibahana tsy hanaovan’ny olona fikarakarana. Rehefa avy eo izy dia hihambo fa izy irery no nahavita ny asa. Ary dia misy sahy milaza hoe : « Dia tena jeren’ny olona fotsiny aho manao raharaha. » Nefa raha ny marina izy no tsy tian’ny hanaovan’ny olona. Raha ny hahafinaritra antsika izao dia ho tahaka izao no fandehan’ny tantara. Rehefa avy niteny tamin’i Jesosy i Marta dia i Maria no niteny hoe. « O ry Marta a ! mijanona kely aloha ianao dia avy mipetraka eto anilako hihaino an’i Jesosy isika. Tsy impiry handalo eto amitsika Izy, fa rehefa avy eo dia hiaraka hikarakara sakafo isika.
Ireo toetran’izy mirahavavy ireo tsy tokony ho ny iray ihany no hananatsika fa toetra mifanampy ireo ka amin’ny fotoana ilaina ny fihainona ny tenin’Andriamanitra dia hataotsika ho zava-dehibe izany. Tsy ho adino koa anefa fa tena mbola ilaina ny fikarakarana ao amin’ny fiangonana
asa, miangatra, mirahavavy, sakafo, vehivavy
Eksodosy 20 :2
Eksodosy 20 :3
Retrouvez tous nos articles depuis l’année 2002. Sélectionner un mois avril 2021 (1) février 2021 (1) janvier 2021 (1) décembre 2020 (2) novembre 2020 (2) octobre 2020 (1) septembre 2020 (1) août 2020 (1) juin 2020 (2) mai 2020 (2) avril 2020 (2) mars 2020 (2) février 2020 (2) janvier 2020 (2) décembre 2019 (6) novembre 2019 (4) octobre 2019 (2) juin 2019 (2) mai 2019 (1) avril 2019 (6) mars 2019 (1) février 2019 (1) décembre 2018 (5) novembre 2018 (1) août 2018 (2) juillet 2018 (2) mai 2018 (2) avril 2018 (1) mars 2018 (8) février 2018 (2) janvier 2018 (4) décembre 2017 (6) novembre 2017 (1) octobre 2017 (1) septembre 2017 (1) août 2017 (3) juillet 2017 (2) juin 2017 (7) mai 2017 (2) avril 2017 (4) mars 2017 (2) février 2017 (1) janvier 2017 (1) décembre 2016 (2) octobre 2016 (1) juillet 2016 (1) juin 2016 (1) mai 2016 (2) mars 2016 (2) février 2016 (6) janvier 2016 (2) décembre 2015 (5) novembre 2015 (1) octobre 2015 (2) septembre 2015 (2) juillet 2015 (1) avril 2015 (3) février 2015 (3) janvier 2015 (4) décembre 2014 (3) novembre 2014 (4) octobre 2014 (1) août 2014 (1) mai 2014 (1) avril 2014 (6) mars 2014 (3) décembre 2013 (1) novembre 2013 (1) octobre 2013 (2) août 2013 (6) juillet 2013 (3) juin 2013 (3) mai 2013 (2) avril 2013 (1) mars 2013 (6) février 2013 (4) janvier 2013 (2) août 2012 (5) juillet 2012 (5) juin 2012 (3) mai 2012 (3) avril 2012 (7) mars 2012 (3) février 2012 (2) janvier 2012 (3) décembre 2011 (3) novembre 2011 (2) octobre 2011 (5) septembre 2011 (4) août 2011 (1) juillet 2011 (6) juin 2011 (5) mai 2011 (4) avril 2011 (7) mars 2011 (1) février 2011 (1) janvier 2011 (3) décembre 2010 (2) novembre 2010 (1) octobre 2010 (1) septembre 2010 (3) août 2010 (1) juillet 2010 (6) juin 2010 (1) mai 2010 (3) avril 2010 (1) mars 2010 (5) février 2010 (4) janvier 2010 (6) décembre 2009 (2) novembre 2009 (3) octobre 2009 (3) septembre 2009 (1) août 2009 (1) juillet 2009 (1) juin 2009 (2) mai 2009 (5) avril 2009 (10) mars 2009 (4) février 2009 (5) janvier 2009 (7) décembre 2008 (5) novembre 2008 (6) octobre 2008 (3) septembre 2008 (4) août 2008 (4) juin 2008 (1) avril 2008 (1) mars 2008 (1) février 2008 (1) janvier 2008 (2) décembre 2007 (1) novembre 2007 (1) août 2007 (3) juin 2007 (4) mai 2007 (1) avril 2007 (1) mars 2007 (4) février 2007 (4) janvier 2007 (7) décembre 2006 (9) novembre 2006 (4) octobre 2006 (7) septembre 2006 (4) août 2006 (2) juillet 2006 (4) juin 2006 (3) mai 2006 (5) avril 2006 (7) mars 2006 (11) février 2006 (8) janvier 2006 (9) décembre 2005 (10) janvier 2005 (1) septembre 2004 (2) août 2004 (3) juillet 2004 (5) juin 2004 (4) mai 2004 (2) avril 2004 (6) mars 2004 (2) février 2004 (3) janvier 2004 (5) décembre 2003 (4) novembre 2003 (6) octobre 2003 (1) mai 2003 (4) avril 2003 (17) mars 2003 (1) février 2003 (4) décembre 2002 (3) novembre 2002 (1) octobre 2002 (6) septembre 2002 (4)
Paska 2021 03/04/2021
159 388 visites